ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: နာရေး သတင်း
ငါ့ကို လာမတွေ့ကြပါနဲ့ ငါအဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး................။
Congratulation ပါ ကိုမျိုးရေ..
ဝထ္ထုလေးက ကောင်းတယ် မောင်မျိုး
မနေ့က ရွေဒေါင်းတောင်မှာဖတ်လိုက်ရတော့ ကိုယ့်ညီ
အရာလေးကို အလှည့်လေးထည့်ပြီးသုံးသွားတာ ကောင်း
အစ်မ သူငယ်ချင်းထဲမှာရှိတယ် အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတော့ အဆင်မပြေကြဘူး။
ဝတ္ထုလေးအနေနဲ့ရော အရေးအသားအရတော့ ဂွတ်ပါ့ :)
ဖဘ ကနေ သွားဖတ်ပြီးတယ်။ ဂွတ်တယ်
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်လေး ဖြစ်ပါစေ ^_^
မောင်မျိုးရေ။ တစ်ခါတစ်ရံ မျှော်လင့်မထားတဲ့
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် ညီရေ..၊ အစက အဆုံးထိ အရေးအသား ပြေပြစ်ချောမွေ့လို့ ဇတ်လမ်းထဲ မျောပါ သွားတယ်၊ 'ဒီလို အဖြစ်မျိုး ရှိသလား' လို့တော့ မမေးတော့ ပါဘူး၊ ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်တယ် မဟုတ်လား၊း)
Merry Christmas ပါ ညီရေ...။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဒီဇင်ဘာနေ့ရက်များ ဖြစ်ပါစေ မောင်မျိူးရေ ..
အိန်ဂျယ်... ကျေးဇူးဗျ အားပေးသွားတာ ။
ဖြိုး... တော်တော် မောလား ညီ နောက်ဆို ဒါမျိုးတွေေ၇ှာင်မှး)
ဆန်းထွန်း.... ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ ။
မချော.... အစ်မကတော့ မြှောက်ပြီ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါဗျာ အစ်မလည်း နှစ်သစ်မှာ ပျော်ပါစေ ။
ကိုညိမ်းနိုင် ... ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်လည်း တစ်ခါမှမရေးဖူးတဲ့ ပုံစံဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ လန့်တယ်ဗျ ဒါပေမယ့်လည်း စာစုံအောင်ရေးချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရေးလိုက်တာပါ ကျေးဇူးနော့် အစ်ကို ။
မခရစ်... ရှိတယ်ဟုတ် ရှိပါတယ်ဆို တစ်ချို့က လက်မခံချင်ကြဘူး အစ်မရ ။
ဖြိုး... လည်းပျော်ပါစေ ။
တီတင့်... Happy New Year !! ပါဗျာ ။
ကိုညီ...း) ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုကတော့ ကျနော့်ကို အမြဲနားလည်ပေးနေတော့တာ ပျော်တယ် ။
မဒမ်ကိုးး... မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါဗျာ ။
ဒီဝတ္တုလေးကို ကျွန်မ နှစ်သက်မိတယ်။